Ahoana. edu backlinks dia mety hisy fiantraikany amin'ny tranokalanao SEO?
Ny RM-backlinks dia heverina ho sarobidy indrindra rehefa avy avy amin'ny sehatra azo itokisana sy mendri-piderana. Matetika izy ireny no ampiasain'ny oniversite, oniversite, sekoly ambaratonga ambony, ary toeram-pampianarana hafa. Raha mitondra hitondra lanjany ho an'ny mpampiasa izy ireo, dia mankasitraka azy ireo i Google ary mihatra amin'ny SERP.
Mitaky fotoana sy ezaka be mba hahazoana rohy amin'ny tranonkala toy izany. Na izany aza, ny tombontsoa dia tsy tokony ho hita fa manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny fanabeazana iray ianao mba hahazoana lohamilina avy eo amin'ny toerana misy anao.
Raha toa ianao ka sahirana amin'ny fananana kalitao. edu backlinks amin'ny tranokalanao, ity lahatsoratra ity dia ho sarobidy ho anao rehefa manangona eto ny teknolojia fanorenana ankapobeny indrindra.
Ny tombotsoan'ny. edu backlinks
Google dia mankasitraka ny edu rehetra. Ireo domains ary avy eo dia hahasarika ny tranokalanao ho marika be raha toa ianao ka mahazo rohy ivelany avy amin'ireo sehatra ireo;
Ny loharanon'ny tranonkala fampianarana rehetra dia manana kalitao avo lenta ary manana ny lanjany ho an'ny mpampiasa;
Mametraka ny rohinao. edu domain, ianao dia hahazo traikefa be dia be izay mora hivadika;
Ny sandan'ny habaka sy ny fahamarinana amin'ny Internet.
Ny fomba hanamboarana kalita. edu backlinks?
Mba hampisy fifandraisana tsara amin'ny oniversite sy sekoly ambaratonga ambony, afaka manome ny mpianatra sy ny vatsim-pianarana.
Azonao atao ny manomboka mikarokaroka ny tranokalan'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny Google na fantsona hafa izay afaka manome anao vaovao mahaliana amin'ny fangatahanao. Ataovy azo antoka fa manana mpitsidika be dia be ny orinasam-pampianarana nofidinao na manontany raha misy oniversite na sekoly manana fiarahamonina. Mankanesa amin'ireo olona miandraikitra ny fiarahamonina. Miorina amin'ny indostria na vokatra azonao varotra, azonao omena. Loharanom-pampianarana edu miaraka amin'ny tombontsoa maro ho an'ny backlinks. Ohatra, raha fitaovana ara-panatanjahantena an-tsena ianao, dia afaka manolotra vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra izay mahay mandrindra amin'ny fanatanjahantena. Raha afaka mamela backlink sasantsasany ianao. loharanon'ny tranonkala edu izay farafaharatsiny misy ifandraisany amin'ny tsenan'ny tsenanao, dia manatsara bebe kokoa ny mombamomba ny backlink ianao.
Manamboara fandriam-pahalemana ho an'ny mpianatra
Raha mizara ireo vokatra sasany izay mety ilaina ho an'ny mpianatra amin'ny zavatra ilainy isan'andro, dia azonao atao ny miezaka ny mamerina rindran-damina ho an'ny fihenam-bidy. Ampio ireo mpianatra manana tolotra sy fanomezana manokana. Ny vokatrao dia mety ho toeram-ponenana na rindrambaiko amin'ny rindrambaiko izay afaka manampy ny mpianatra hanohy ny diany. Mila mangataka dinika ho an'ny anjerimanontolo ianao hamoahana ny tolotra omenao ao amin'ny tranonkala.
Mamorona votoaty izay liana amin'ny mpianatra
Tsy hahazo ny backlinks kalitao ianao, indrindra indrindra. tranokalan'ny edu, raha manana tombam-bidy ho an'ny mpamaky ny votoatin'ny tranonkala. Tsy misy olona te-hamaky amin'ny votoatiny azo antoka.
Ny ankamaroan'ny toeram-pampianarana dia mitazona bilaogy ho an'ny mpianatra. Azonao atao ny mangataka mba hamoahana ireo lahatsoratra mifandraika amin'ny fikarohana sy fikarohana ao amin'ity blôgy ity na mamaly valiny mahaliana amin'ny fanontanian'ny mpianatra Source .